Yey yihiin Senatoradii shalay lagu doortay MUQDISHO? - Caasimada Online
Home Warar Yey yihiin Senatoradii shalay lagu doortay MUQDISHO?
Muqdisho (Caasimada Online)- Magaalada Muqdisho waxaa shalay lagu doortay lix ka mid ah 11-ka senator ee gobollada waqooyi ka soo geleysa golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana hartay shan kale oo lagu wado in berri la doorto.
Xubnaha shalay lagu doortay Afisyooni ayaa kala ah: 1- Guddoomiyihii hore ee Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullahi, 2- Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar, 3- Wasiirka Dastuurka Saalax Axmed Jaamac, 4- Wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dubbe, 5- Layla Axmed Ismaaciil, 6- Iyo Bilaal Idiriis Cabdullahi.
Hadaba waxaan halkaan idinkugu soo gudbineynaa afarta Senator ee ugu caansan taariikh nololeedkooda.
Waa kuma Cabdi Xaashi?
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdulahi, Waxaa uu ku dhashay Baabiley , Itoobiya sanadkii 1946-dii.
Hadaba waa Kuma Saalax Axmed Jaamac?
Xildhibaan Saalax Axmed Jaamac: Waxa uu dhashay sanadkii 1980-kii, waxaa uu ku dhashay Ceerigaabo Sanaag, dhanka waxbrashada Degree-ga koobaad iyo Master ee cilmiga siyaadda ka heysta Jaamacadda Carleton University.
Waxaa uu ka shaqeeyey barnaamijkii New Deal , Booliska Soomaaliya hay’adda Qaramada Midoobay iyo xubin ka tirsan guddidii doorashooyinka, waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 10aad, 4-tii sano ee lasoo dhaafay waxaa uu soo qabtay labo wasaarad oo xukuumadda federaalka ah, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda dastuurka.
Waxaa uu sidoo kale isku duwe ka ahaa guddi dhanka Farsamada ka taagerayay doorashooyinkii 2016 kuwaas oo ka kala socday dowlad gobaleedyada dalka iyo dowladda Federaalka.
Saalax ayaa sidoo kale horay uga soo shaqeeyay Wasaaradda Arrimaha Gudaha & Arrimaha Federaalka isagoo ahaa La -taliyaha Sare ee Doorashada oo loo xilsaaray hirgelinta ajendaha dimuqraadiyadda ee Dowladda Federaalka.
Intii uu ka shaqaynayay Wasaaradda, Saalax wuxuu kaloo noqday La-taliyaha horumarinta Istiraatiijadda siyaasadda Siyaasadda.
Saalax Axmed Jaamac, ka hor inta uusan dowladda ku biirin waxa uu ka shaqeyay Adeegyada horumarinta Bulshada.
Waxa uu sidoo kale wasiirka ka shaqeyay arrimaha dowlad dhisidda, Nabadeeynta, Xalinta khilaafaadka, isagoo qoraallo ka sameeyay Dimoqoraadiyadda iyo fursadaha dowlad dhiska ee dalalka nugul.
Waa Kuma Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar?
Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar Taariikhda Prof. Cabdi Samatar waa 59 jir ku dhashay magaalada Gebiley ee waqooyi galbeed, ee Somaliland.
Xagga waxbarashada, cilmiga waxbarashada ayuu ka bartay University of Wisconsin–La Crosse, cilmiga qorshaha magaalooyinka ayaa waxaa uu ka diyaariyey Masterka Jaamacadda Iowa State halka PhD uu ka dhigtay UC Berkeley.
Hadda waxaa uu Geography ka dhigaa University of Minnesota, cilmi baarana ka ah University of Pretoria, buugaag badan ayuu qoray waxaa ka “Africa’s First Democrats’.
Prof. Samatar waxaa uu caan ku yahay falanqeynta siyaasadda, isaga horay qeyb ka ahaa doorashada, noqdana guddoomiyaha guddiga anshaxa iyo hufnaanta, waxaa shalay loo doortay Senator baarlamaanka 11-aad.
Hadaba Waa Kuma Cismaan Abuukar Dubbe ?
Wasiir Cismaan Abokor Dubbe wuxuu horaantii todobaatanaadkii ku dhashay degaanka Shan-Shacadde oo ka tirsan dagmada Burco ee Gobolka Togdheer. Tacliinta dhexe iyo Sarena waxa uu ku dhamaystay dugsiyada 1da Maajo iyo Kaasa-Bobolaare ee dagmada Hodan, ee magaalada Muqdisho.